ESI EDEZI JPG N'ỊNTANET - ỌRỤ NTANETỊ - 2019
Dezie foto JPG n'igwe
Otu n'ime usoro ihe oyiyi kachasị ewu ewu bụ jpg. Ọtụtụ mgbe, maka idezi foto ndị dị otú ahụ jiri usoro pụrụ iche - onye nchịkọta akụkọ, nke nwere ọtụtụ ọnụọgụ ngwaọrụ na ọrụ dị iche iche. Otú ọ dị, ọ gaghị adị mfe mgbe niile iji wụnye ma na-agba ọsọ na ngwanrọ dị otú a, ya mere, ọrụ ntanetị na-abịa napụta.
Na-edezi foto JPG na ntanetị
Usoro nke na-arụ ọrụ na ihe oyiyi nke usoro a na-atụle dịka ọ ga-adị na ụdị ụdị faịlụ ndị ọzọ; ihe niile na-adabere na arụmọrụ nke akụ na-eji, ọ pụkwara ịdị iche. Anyị ahọrọla saịtị abụọ maka gị iji gosipụta otu ị ga - esi jiri ngwa ngwa gbanwee ihe oyiyi dị otú a.
Usoro 1: Fotor
Fotor ọrụ shareware na-enye ndị ọrụ ohere iji iji chekwaa atụmatụ ha na oru ha ma jiri ha na-eji ndozi pụrụ iche. Mmekọrịta ya na faịlụ ya dị na ya dịkwa, ọ na-eme ya dị ka ndị a:
Gaa na ebe nrụọrụ weebụ Fotor
Mepee isi peeji nke saịtị ahụ ma gaa mpaghara edezi site na ịpị bọtịnụ kwesịrị ekwesị.
Mbụ ị ga-ebugo foto. Ị nwere ike ime nke a site na iji nchekwa weebụ, netwọk mmekọrịta Facebook ma ọ̄ bụ naanị ịgbakwunye faịlụ dị na kọmputa gị.
Ugbu a, tụlee ụkpụrụ bụ isi. A na-eji ya eme ihe site na iji ihe ndị dị na mpaghara kwesịrị ekwesị. Site n'enyemaka ha, ị nwere ike ịgbanwe ihe, gbanwee ya, gbanwee ụda gamut, akuku ma ọ bụ rụọ ọtụtụ omume ndị ọzọ (gosiri na nseta ihuenyo n'okpuru ebe a).
Hụkwa: Otu esi egbutu foto n'ime akụkụ na ntanetị
Ọzọ bụ ụdị "Mmetụta". N'ebe a, otu ihe a na-akwụghị ụgwọ, nke a kpọtụrụ aha na mbụ, abanye. Ndị mmepe ọrụ na-enye ihe ntanetị na ntanetị, ma ha achọghị ka eji ha mee ihe. Ya mere, ọ bụrụ na ịchọrọ ka mmiri dị na onyinyo ahụ, ị ​​ga-azụ ihe akaụntụ Pro.
Ọ bụrụ na ị na-edezi foto na mbiet nke onye, ​​jide n'aka na ị na-ele menu "Mma". Ngwaọrụ ndị dị n'ebe ahụ na-enye gị ohere iwepu ezughị okè, na-eme ka ọkpụkpụ sụgharịa, wepụ ntụpọ na weghachite akụkụ ụfọdụ nke ihu na ahụ.
Tinye otu etiti maka foto gị iji gbanwee ya ma mesie akụkụ ahụ ike. Dị ka a na - enwe mmetụta, a ga - atụgharị akara mmiri na etiti ọ bụla ma ọ bụrụ na ị zụtaghị ndenye aha na Fotor.
Nchọpụta ndị nweere onwe ha ma rụọ ọrụ dị ka ihe ndozi maka foto. Enwere ọtụtụ ụdị na agba. Nanị họrọ nhọrọ kwesịrị ekwesị ma dọrọ ya na mpaghara ọ bụla na waaaji iji gosipụta mgbakwunye.
Otu n'ime ihe kachasị mkpa mgbe ị na-arụ ọrụ na ihe oyiyi bụ ike ịgbakwunye ederede. Na ntanetị weebụ anyị na-atụle, ọ dịkwa adị. Ị na-ahọrọ aha kwesịrị ekwesị ma nyefe ya na waaaji.
Na-esote, a na-emepe ihe nhazi ahụ, dịka ọmụmaatụ, na-agbanwe agbanwe, ụdị agba na nha ya. Ihe odide ahụ na-akwali kpamkpam n'ókèala ebe ọrụ.
N'elu panel ahụ nwere ngwaọrụ maka imezigharị omume ma ọ bụ na-eme nzọụkwụ n'ihu, ihe ngosi mbụ ahụ dịkwa na ebe a, a na-ewepụ nseta ihuenyo, a gbanwere mgbanwe iji chekwaa.
Naanị ị chọrọ ịtọ aha maka ọrụ ahụ, dezie usoro nchekwa nchekwa ahụ, họrọ àgwà ma pịa bọtịnụ ahụ "Download".
Nke a mejupụtara ọrụ ahụ na Fotor. Dị ka ị pụrụ ịhụ, ọ dịghị ihe dị nhịahụ na-edezi, ihe kachasị mkpa bụ ịza ọtụtụ ngwá ọrụ dị iche iche ma ghọta otú ha ga-esi jiri ha mee ihe.
Usoro 2: Pho.to
N'adịghị ka Fotor, Pho.to bụ ọrụ ntanetị n'efu n'enweghị ihe mgbochi ọ bụla. Enweghị ndebanye aha, ịnwere ike ịnweta ngwaọrụ na ọrụ niile, nke iji nke a tụlee:
Gaa na weebụsaịtị Pho.to
Mepee ebe obibi nke saịtị ma pịa "Malite na-edezi"ịga ozugbo na nchịkọta akụkọ ahụ.
Mbụ, bulite foto site na kọmputa gị, netwọk mmekọrịta Facebook, ma ọ bụ jiri otu n'ime atụmatụ ndebiri atọ ahụ.
Ngwaọrụ mbụ na n'elu panel bụ "Trimming", na-enye ohere ka ese onyinyo ahụ. E nwere ọtụtụ ụdị, tinyere aka ike, mgbe ị na-ahọrọ ebe a ga-ada.
Gbanwee foto ahụ na ọrụ ahụ "Tụgharịa" na ọnụ ọgụgụ dị elu nke ogo, tụgharịa uche na ya ma ọ bụ na ntanetị.
Otu n'ime akụkụ kachasị mkpa nke edezi bụ ịtọ ntọala. Nke a ga-enyere ọrụ dị iche. Ọ na-enye gị ohere ịmegharị ọkụ, ọdịiche, ìhè na onyinyo site na ịkwaga ndị na-asọba n'aka ekpe ma ọ bụ aka nri.
"Agba" Ha na-arụ ọrụ n'otu ụkpụrụ ahụ, ma n'oge a, a na-agbanwe okpomọkụ, ụda, ụda, na mpaghara RGB.
"Nkekọrịta" a na-edegharị na palette dị iche, ebe ndị mmepe nwere ike ọ bụghị naanị ịgbanwe uru ya, kamakwa ịme ka ịbịaru ọnọdụ.
Lezienụ anya na setịpụtrị ihe osise. Ha nile nweere onwe ha ma hazie site n'òtù. Gbasaa ọkacha mmasị gị, họrọ foto ahụ ma kwaga ya na waaaji. Mgbe nke ahụ gasịrị, a ga-emeghe windo nhazi, ebe ebe, nha na nghọta dị na-agbanwe.
Hụkwa: Tinye ihe nkwụnye na foto online
Enwere ọtụtụ ederede ederede, Otú ọ dị, ị nwere ike ịhọrọ ụdị onwe gị kwesịrị ekwesị, gbanwee nha, gbakwunye onyinyo, ọrịa strok, ndabere, nghọta nghọta.
Ọnụnọ nke ọtụtụ nsogbu dị iche iche ga-enye aka gbanwee foto ahụ. Naanị mee ka ọnọdụ ịchọrọ na ịkwagharị ihe mmịfe ahụ na ntụziaka dị iche iche ruo mgbe ike nchịkwa nchara ruru gị aka.
Tinye ọrịa strok iji mesie ala ala ahụ ike. A na-ekewa okpokolo agba n'ime edemede na ahaziri site nha.
Ihe ikpeazụ dị na panel ahụ bụ "Ụdị", na-ahapụ gị ka ị rụọ ọrụ mode Bokeh n'ụdị dị iche ma ọ bụ jiri nhọrọ ndị ọzọ. A na-ahazi ntọala ọ bụla iche iche. A na-ahọrọ ike, nghọta, saturation, wdg.
Gaa n'ihu ịchekwa ihe oyiyi ahụ site na ịpị bọtịnụ kwesịrị ekwesị mgbe ị mechara dezie ya.
Ịnwere ike ibudata foto ahụ na kọmputa gị, kesaa ya na netwọk mmekọrịta ma ọ bụ nweta njikọ kpọmkwem.
Lee kwa: Mepee JPG oyiyi
Nke ahụ bụ ebe nduzi anyị na-edezi foto JPG nwere ọrụ abụọ dị n'ịntanetị na-abịa na njedebe. Ị marala akụkụ nile nke nhazi nke faịlụ ndị nwere eserese, tinyere nhazi nke ọbụna nkọwa kacha nta. Anyị na-atụ anya na ihe eji enyere gị aka bara uru.
Gwa foto PNG na JPG
TIFF tọghata na JPG